वैदेशिक सहयोगका अधिकांश सडक आयोजना ठप्प - नेपालबहस
| १४:५५:२१ मा प्रकाशित
३१ भदौ, काठमाडौं । वैदेशिक सहयोगमा निर्माणाधीन अधिकांश सडक आयोजना ठप्प छन् । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण देशभरमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना अघि बढ्न नसकेका हुन् ।
नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गबाहेकका अरु आयोजनामा काम अघि बढेको छैन । निर्माणाधीन योजनासँगै निर्माण शुरु गर्ने भनिएका आयोजनासमेत अहिले निर्माण शुरु हुने अवस्थामा छैनन् । बुटवल–पोखरा सडक विस्तार, नागढुङ्गा मुग्लिन सडक र सोही स्थानमा त्रिशूली पारिपट्टि बनाइँदै गरेको सडक, गल्छी–त्रिशूली– मैलुङ–स्याफ्रुबँेसी सडकलगायत आयोजनमा यसको प्रभाव देखिएको छ । यीमध्ये कतिपयमा निर्माण ठप्प र कतिपय कछुवा गतिमा अघि बढेको सडक विभागका सहायकता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए।
उनले भने, “सबै योजनामा यथास्थितिमा नै निर्माण ठप्प छ ।” काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न योजनामा वैदेशिक लगानी सुनिश्चित भए पनि कोभिड–१९ कै कारण अघि बढ्न नसकेको पाइन्छ ।” चक्रपथको पहिलो चरणका रुपमा कोटेश्वर–कलङ्की सडक निर्माण गरेको चीन सरकारले दोस्रो खण्डको पनि विस्तार गर्ने जनाएको थियो । निर्माणस्थल खाली भइसके पनि चिनियाँ टोली आइसकेको छैन । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग९जाइका० ले जडीबुटी र नयाँ बानेश्वर चोकमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्ने गरी छलफल भएको थियो ।
विगतका वर्षदेखि नै जाइकाले सो स्थानमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्न चाहेको थियो । तत्काल कुनै पनि योजना अघि बढ्ने अवस्था नभएको प्रमुख थापाले बताए । उनले भने, “अवस्था सामान्य नहुँदासम्म उनीहरु आएर काम शुरु गर्ने देखिँदैन ।”
सडक नबनाउने ठेकेदार, गाली खाने प्रधानमन्त्री ! १० घण्टा पहिले
शिवनगरस्थित हिलाम्य सडक २ दिन पहिले
आजदेखि लामो दूरीका गाडी संचालन, सडकमा यात्रु कम ! १ हप्ता पहिले
हेटौँडामा एक वर्षमा साढे ३२ किलोमिटर सडक पक्की १ हप्ता पहिले
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रसूति सेवा बन्द २ हप्ता पहिले
पहाडबाट लेदो झरेर नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध २ हप्ता पहिले
विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा डुङ्गामा सरर … १२ मिनेट पहिले
टस हारेर व्याटिङ थालेको पञ्जाबको शानदार शुरुवात १६ मिनेट पहिले
भत्केको सिंचाई नहर पुर्ननिर्माणमा जुटे चापाकोट नगरका प्रमुख गिरि १८ मिनेट पहिले
पर्यटकको पर्खाइमा सौराहाका हात्ती २४ मिनेट पहिले
आईपीएल २०२० मा सर्वाधिक छक्का हान्ने १० व्याट्सम्यान, धोनी र कोहली आउट ! ३४ मिनेट पहिले
राष्ट्रपतिसमक्ष राजदूतबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश ५३ मिनेट पहिले
प्रदेश नं १ मा १८१ संक्रमित थपिए १ घण्टा पहिले
यमनी सरकार र हुथी विद्रोहीबीच बन्दी आदान प्रदानको लागि सहमति १ घण्टा पहिले
अर्थतन्त्रको बृद्धिदर शून्यको नजिक, अर्थविद् सोचमग्न ! २ घण्टा पहिले
सशस्त्र प्रहरीको गण स्थापनका लागि स्थानीयले दिए सहमति ४ दिन पहिले
मुक्तिनाथ रेमिटको सेवा अब अष्ट्रेलियाबाट पनि ३ घण्टा पहिले